Sango remhepo ina: ndiani akarinyora, ndezvei nezve | Zvazvino Zvinyorwa
Sango remhepo ina
Gore rakapera bhuku racho rakatengeswa Sango remhepo ina, mhosva uye chakavanzika inoverengeka iyo munguva pfupi yakawana yechipiri edition. Iwe unogona kunge wakazviona muzvitoro zvemabhuku uye zvakabata ziso rako.
Gara muCantabria, bhuku iri nderimwe riri kupa zvimwe zvekutaura nezvazvo, asi chii chinonzi Sango reMhepo ina pamusoro pazvo? Ndiani akanyora? Sei uchifanira kuverenga? Isu tichakuudza.
1 Ndiani akanyora Sango reMhepo ina
2 Chii chinonzi Sango reMhepo ina pamusoro
3 Vanonyanya kutaurwa
4 Iri ibhuku rakasarudzika kana saga?
5 Nei Uchifanira Kupa Sango reMhepo ina Mukana
Ndiani akanyora Sango reMhepo ina
Kwayaka: María Oruña
Sango remhepo ina raisazove bhuku dai munyori María Oruña anga asina zano. Nekudaro, semamwe mazhinji maanovels anobata nechimwe chikamu chenhoroondo, zvaida makore akati wandei ezvinyorwa kuti zvese zvisungwe uye zvakasungwa zvakanaka. Muchokwadi, kumagumo ebhuku munyori iye pachake akataura kuti ndezvipi zvikamu chaizvo (zvenyaya kana ngano) uye chikamu chipi ingano, kuitira kuti tiwane pfungwa yekutsvagisa kukuru kwaakaita.
Asi María Oruña ndiani?
María Oruña akaberekwa muna 1976 muVigo. Iye munyori weGalician uye bhuku iri, Sango reMhepo ina harisi bhuku rake rekutanga. Kubudirira kukuru kwakauya kumunyori uyu aine yake Puerto Escondido trilogy, mabhuku matatu akaburitswa neDestino imba yekutsikisa uye yakaratidza kutanga kwenyaya yematsotsi, nekubudirira kwakanyanya nekuti yakakurumidza kududzirwa muchiCatalan, chiGerman neSpanish. .
Sango remhepo ina ndiyo nhoroondo yemunyori yazvino, yaakaburitsa muna 2020, akasungwa zvakakwana, asi izvo hazvina kumutadzisa kubudirira.
Zvino, iye anongova munyori here? Zvakanaka, chokwadi ndechekuti kwete. Chaizvoizvo Kudzidziswa kwake kuri mumutemo, sezvo ari gweta. Asi izvo hazvina kumuita kuti arwire kuve munyori uyezve munyori. Kwemakore gumi aive achishanda sevose vari vaviri gweta revashandi uye vezvekutengesa, uye muna10 ndipo paakatanga bhuku rake rekutanga-rakaburitswa, La mano del arquero, raitaura nezvekushungurudzwa pabasa nekushungurudzwa kwechiremera. Sekureva kwemunyori, nhoroondo iyi yaive yakavakirwa pamatambudziko iye iye aakaziva kuburikidza nebasa rake.
Chii chinonzi Sango reMhepo ina pamusoro
Iwe unofanirwa kuziva nezve Sango reMhepo ina inova inova iyo inoitika mukati menguva mbiri. Kune rimwe divi, zvakapfuura, kwauna Dr. Vallejo naMarina, hupenyu hwavo hwezuva nezuva muzana ramakore reXNUMX uye zvese izvo zvaireva, kumurume nemukadzi.
Kune rimwe divi, iwe unayo iye zvino, naJon Bécquer, rudzi rwemuongorori ari mukuvhima kwechokwadi, kana kwete, kwenyaya.
Iyo nyaya inopindirana pakati pemitsetse miviri, sezvo mavara ese ari pedyo nehukama kune mumwe nemumwe. Zvinogona kutaurwa kuti, kunyangwe iyo nongedzo iri humhondi hunobatanidza zana ramakore rechiXNUMX neyaJon Bécquer yazvino, sezvo rondedzero ichifambira mberi iwe unoona mashandisirwo evatambi zvakanyanya kune chakavanzika chikuru: iyo ngano yemhete pfumbamwe.
Zvinoenderana nengano iyi, paive nemhete pfumbamwe dzemabhishopi mapfumbamwe aive nemasimba emashiripiti, anokwanisa kupora. Asi isu hatizoratidze zvimwe kwauri kuti usageze chinhu kubva mubhuku.
Tinokusiira iyo zvirevo:
Pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX, Dr. Vallejo akafamba kubva kuValladolid kuenda kuGalicia pamwe nemwanasikana wake Marina kunoshanda sachiremba mune yemamongi ine simba muOurense. Ipapo ndipo pavanozoona dzimwe tsika uye vachasangana nekudonha kweChechi. Marina, anofarira zvemishonga uye bhotani asi asina mvumo yekudzidza, acharwa nemagungano ayo nguva yake yaanoisa paruzivo nerudo uye achanyudzwa mune yekushanya iyo icha chengeta chakavanzika kweanopfuura makore churu.
Muzuva redu, Jon Bécquer, anthropologist asina kujairika anoshanda achitsvaga akarasika zvidimbu zvekare, anoongorora ngano. Pavanongotanga kuferefetwa kwavo, mubindu reimba yemamongi chitunha chemurume akapfeka tsika yeBenedictine yeXIX inoonekwa. Ichi chokwadi chichaita kuti Bécquer ipinde mukati memasango eGalicia ichitsvaga mhinduro uye ichidzika nematanho anoshamisa enguva.
MuSango reMhepo ina tichaenda kunosangana nevanhu vazhinji asi, varipo vatatu vavo, vanomira kuve nezwi rekuimba, kana nekuti munyori anotarisa pazviri. Izvi ndeizvi:
Chiremba Vallejo. Iyo inowirirana neiyo (zvakare yakakosha) hunhu hwaMarina, nekuti uyu ndiye mwanasikana wake. Nguva yake ndeyekare, nekuti achakuudza nezvenhoroondo yake pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX paakagara muGalicia nemwanasikana wake kunoshanda sachiremba mune yemamongi yeOurense.
Marine. Iye anogona kunge ari iye wechokwadi hunhu hukuru hwenhoroondo. Akasvika kuimba yemamongi yeOurense muna 1830 uye akatanga kufarira zvemishonga (nababa vake) uye bhotani (nemamongi nababa vake chaiye). Nekudaro, zvinotsauka kubva pane izvo "zvakajairwa" kune mukadzi panguva iyoyo, uye pamberi peizvi. Mamiriro ake semukadzi zvinoreva kuti anofanirwa kurwisana neizvi zvakaganhurirwa.
Jon Becquer. Hunhu hunobva pane imwe yaivapo chaizvo. Mubhuku iye ndiye mutikitivha wehunyanzvi uyo ari kumashure kwengano yemhete pfumbamwe. Vamwe vanomutsanangura seIndiana Jones asi haadi kumuda nekuda kwehunhu hwake.
Iri ibhuku rakasarudzika kana saga?
Nguva zhinji, kuverenga munyori mutsva kunotipa kakutya, kunyanya nekuda kweiyo fashoni yazvino yekuburitsa mabirogiri, trilogies uye saga dzakaumbwa nemabhuku mazhinji, uko nyaya yacho haiperi.
Kana isu tichifungawo kuti izvi zvisati zvaitika, María Oruña akaburitsa trilogy, zvakajairika kuti une kusahadzika kuti bhuku iri rakasarudzika kana chikamu chesaga.
Uye ndiye iye munyori akazviburitsa pachena: a nyaya yekuzvipedzisa. Ndokunge, inotanga uye inopera mubhuku rimwe chete; pasina zvimwe. Izvo zvinoita kuti zvese kutsvagisa uye zano rizadzikiswe mubhuku rimwe chete iro rinogona kuverenga nyore mumazuva mashoma (sekureba sekunge rinosungira iwe, hongu).
Nei Uchifanira Kupa Sango reMhepo ina Mukana
Iwe unotoziva zvishoma zvishoma nezve Iyo Sango reMhepo ina, asi pamwe haudi kuyedza izvozvi, kana iwe hauzive kana uchifanira kunyatsoverenga kana kwete. Pane zvikonzero zvinoverengeka zvekuzviita.
Ibhuku rakasarudzika, rinozvipedzisa. Kana usati waverenga munyori kare, kupinda mune trilogy kunogona kuve kwakanyanya. Asi iwe unogona kuverenga bhuku uine mavambo uye magumo kuti uone kana iwe uchida chinyoreso chake kana kwete.
Zviri nezve chikamu chenhoroondo yeSpain. Nguva zhinji isu tinoziva zvakawanda nezvenhoroondo yeimwe nyika kupfuura yedu. Uye izvo zvinosuruvarisa chaizvo. Saka kana iwe uchida kuziva kuti vanhu vaigara sei munzvimbo iyoyo yeSpain muzana ramakore reXNUMXth uye zvakare kudzidza nezve alchemy, botany, mushonga ... iwe unogona kuyedza.
La mukadzi ane chinzvimbo chinotungamira muruzivo. Uye isu tiri kutaura nezvezana regumi nemapfumbamwe century, asi isu tichaona kuti mukadzi pano anozvitsigira sei nenzira inoshamisa kwazvo.
Wakaverenga here Sango reMhepo ina? Unofungei nezvake?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Sango remhepo ina